Manome fotoana faharoa an'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-04 mpandimby ny Magazine > Manome fotoana hafa ve Andriamanitra?
Ny sarimihetsika mihetsika mahazatra: mbola misy 10 segondra alohan'ny hipoaka ny baomba ary mahafaty olona an'arivony, raha tsy hilaza afa-tsy ilay mahery fo manan-kaja izay manandrana manala baomba. Ny hatsembohan'ny tarehin'ilay maherifo dia mitete ary mifoka rivotra ireo polisy mihenjana sy ireo mpilalao hafa. Inona no tariby tsy maintsy tapahina? Ny mena? Ilay mavo? Efatra segondra sisa. Ny mena! Roa segondra hafa. Tsia, ilay mavo! Snap! Iray ihany ny fahafahana mahazo izany. Noho ny antony, ny mahery fo ao amin'ny sarimihetsika dia nanapaka foana ny tariby tsara, fa ny fiainana dia tsy sarimihetsika. Efa nahatsapa ve ianao fa nanapaka ny tariby diso ianao ary tampoka teo dia toa very daholo ny zava-drehetra? Mino aho fa raha mijery ny fiainan'i Jesosy isika dia ho hitantsika raha omen'Andriamanitra fahafahana faharoa. Jesosy dia Andriamanitra (ary Izy) ary ny fiainany sy ny toetrany dia maneho mazava tsara ny toetran’Andriamanitra Ray. Ary nony nanatona an'i Jesosy Petera mpianatra ka nanontany Azy hoe: Tompoko, impiry moa no tsy maintsy hamela ny rahalahiko izay nanota tamiko? Ampy ve izany impito? Hoy Jesosy taminy: Tsy impito akory no lazaiko aminao, fa impito impito (Matio 18:21-22).
Mba hahatakarana ny maha-zava-dehibe an'io resaka io, dia mila mahazo ny toetran'ny olona kely fotsiny ny kolontsaina tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany dia nisy mpampianatra fivavahana nilaza fa hamela heloka intelo. Aorian'izany dia tsy mila. Nihevitra i Petera fa olona tena marina izy ary tena nampiaiky an’i Jesosy ny valin-teniny namela ny helokao ny olona fito impito. Saingy tsy nampiavaka an’i Jesosy izany fa nampahafantatra an’i Petera fa tsy azony ny foto-kevitry ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka dia tsy momba ny fanisana, satria tsy mamela heloka amin'ny fonao rehetra ianao. Rehefa nilaza i Jesosy fa tokony hamela impito impito ianao, dia tsy midika hoe 490 heny, fa tokony hamela mandrakizay. Izany no toetra amam-panahy sy tena fon'i Jesosy ary koa an'Andriamanitra, satria i Jesosy, Andriamanitra Ray sy ny Fanahy Masina dia iray. Tsy hoe eo amin'ny maha-izy azy ihany, fa amin'ny toetra koa - izany dia ampahany amin'ny Andriamanitra telo izay iray.
Tsy ampy ny fotoana?
Nahita olona tena mino aho fa nanota matetika loatra ka tsy afaka mamela azy ireo intsony Andriamanitra. Tsapan’izy ireo fa very ny fahafahany miaraka amin’Andriamanitra ka tsy ho voavonjy intsony. Ny fiainan’i Jesosy sy ny asan’i Jesosy indray dia miresaka be dia be: Petera, naman’i Jesosy akaiky indrindra, dia nandà Azy intelo (Matio 2.6,34, 56, 69-75) nefa mbola naninjitra ny tanany i Jesosy ka mamela heloka ary tia azy. Mino aho fa io traikefa io dia zava-dehibe teo amin’ny lafiny maro teo amin’ny fiainan’i Petera. Lasa iray amin’ireo mpanara-dia an’i Jesoa mahatoky sy nanan-kery indrindra sy mpitarika ny Fiangonany izy. Ohatra iray manaitra ny amin’ny famelan-keloka marina avy amin’Andriamanitra koa ny hoe na dia maty teo amin’ny hazo fijaliana aza i Jesosy tamin’ny fanaintainana mafy, dia namela tamin’ny fony manontolo ireo tompon’andraikitra tamin’ny fahafatesany izy, na dia mbola naneso azy aza izy ireo. Eritrereto kely izany. Fitiavana sy famelan-keloka tsy mampino, tena avy amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra irery ihany no afaka manome.Mifanohitra amin’ny fahatakarana iombonan’ny mino sy ny tsy mino, fa tsy manaraka anao Andriamanitra. Tsy zavatra lehibe tsy azo tratrarina izy ka mipetraka any an-danitra miandry fotsiny ny hisambotra anao raha manao fahadisoana ianao. Tsy izany no maha Andriamanitra antsika fa isika olombelona. Anisan’ny toetrantsika izany fa tsy azy. Isika no mitanisa ny tsy rariny nanjo antsika fa tsy Andriamanitra. Isika no mitsahatra ny famelan-keloka sy ny fampitsaharana ny fifandraisana, fa tsy Andriamanitra.
Afaka mahita ohatra maro isika ao amin’ny Baiboly, izay mampiseho ny fitiavan’Andriamanitra antsika sy ny faniriany ho antsika. Impiry moa izy no mampanantena antsika hoe: Izaho tsy handao anao na hahafoy anao (Hebreo 13:5). Ny fanirian’Andriamanitra ho antsika dia ny tsy hahavery antsika, fa ny hamonjena ny olona rehetra. Ny tena mahafinaritra amin’izany dia tsy vitan’ny hoe nilaza an’ireo teny mahafinaritra ireo Andriamanitra sy Jesosy, fa nampiseho ny zavatra rehetra nolazainy tamin’ny alalan’ny fiainan’i Jesosy koa. Manome fahafahana faharoa ve Andriamanitra ankehitriny?
Tsia ny valiny - Andriamanitra dia tsy manome antsika vintana fanindroany fotsiny, fa mamela heloka imbetsaka hatrany hatrany isika. Miresaka tsy tapaka amin'Andriamanitra momba ny fahotanao, ny tsy mety ary ny ratra ataonao. Tazano tsara izy fa tsy izay heverinao fa tsy ampy. Tsy manisa ny fiheveran'izy ireo Andriamanitra. Hanohy tia antsika hatrany Izy, mamela antsika, ho eo anilantsika ary hifikitra amintsika na inona na inona zavatra tonga. Ny fitadiavana olona hanome antsika vintana faharoa - na isan'andro aza - tsy mora, fa i Jesosy dia manolotra antsika roa tonta.